११ वर्षका बालकले गरे १२ कक्षा पास, १७ वर्षीयाको पिएचडी सुरुः यसरी भयो सम्भव
बैशाख ५ – हैदराबादमा बस्ने ११ वर्षका अगस्त्य र उनकी दिदी नैना जायसवालले निकै सानो उमेरमा ठूलै सफलता हात पारेका छन् ।
अगस्त्यले ११ वर्षको उमेरमा १२ कक्षा पास गरेका छन् भने उनकी दिदी नैनाले पनि मात्र १० वर्षको उमेरमा १२ कक्षा पास गरेकी थिइन् ।
अश्विनी र भाग्यलक्ष्मी जायसवालका छोरा अगस्त्या अब बी. कमको पढाई गर्ने सोचमा छन् र उनको डाक्टर बन्ने सोच छ ।
बच्चाले देखाए कमालः
सन् २००८ मा अश्विनीले आफ्नो स्कूल बन्द गरेर आफ्नो पूरा समय बच्चालाई दिन सुरु गरे ।
अश्विनीले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, ‘महात्मा गान्धीले भनेका छन् कि कुनै पनि बच्चाको पहिलो शिक्षक उनकी आमा हुन्छिन् । हामी यहि बाटोमा हिँड्न चाहन्थ्यौं । किनभने, एक आमा र बच्चाबिच जुन भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ त्यो अन्य सम्बन्धमा हुँदैन ।’
कसरी भयो यस्तो अचम्म ?
अश्विनी र भाग्यलक्ष्मीले आफ्ना दुबै बच्चालाई स्कूलको शिक्षा दिनुको साटो आफैंले घरमा पढाउने निर्णय गरे ।
भाग्यलक्ष्मीले आफ्नो दुबै बच्चा नैना र अगस्त्यका लागि पढाईलाई खेलजस्तै रोचक बनाउन काम गरे । यस्तै, अश्विनीले उनलाई काखमा बोक्दा बोक्दै अक्षर कोर्न र रचनात्मक क्रियाकलाप सिकाउन सुरु गरे ।
उद्देश्य मात्र एउटा थियो बच्चालाई डिग्रीतर्फ लक्षित नगरी ज्ञान आर्जन गर्न प्रेरित गर्नु थियो ।
अश्विनी भन्छन्, ‘दुई वा अढाई वर्षका बच्चालाई प्लेग्रुपमा भर्ना गर्नु मलाई ठिक लाग्दैन किनभने बच्चाहरु समूहमा सिक्दैनन् । ’
५ वर्षको उमेरमा गीता–रामायणको ज्ञानः
अश्विनीले ५ वर्षको उमेर पुगेपछि बच्चालाई मातृ भाषा हिन्दीसमेत गीता र रामायणका श्लोक पनि सिकाए ।
अगस्त्यका बुवा अश्विनी भन्छन्, ‘वर्णमालासँग जोडिएका सबै परिक्षा पास गरेपछि हामीले बच्चालाई पत्रिका पढ्न दियौं । त्यसपछि उनीहरुलाई गीता र महाभारतको श्लोक पढायौं जसका कारण उनीहरुको उच्चारण राम्रो भयो । त्यसपछिको ६ महिनामा उनीहरुले हिन्दी सिके । त्यसपछि हामीले उनीहरुलाई तेलंगानाको आधिकारिक भाषा तेलगु पढाउन सुरु गर्यौं । त्यसको ६ महिनापछि विज्ञान, सामाजिक अध्ययन र गणितजस्ता विषयका लागि एक–एक वर्ष दियौं ।’
त्यसपछि नजिकैको स्कूलमा उनीहरुको नाम लेखाइयो र उनीहरुको घरमा नै पढाई भइरहेको जानकारी गराइयो । स्कूल पनि बच्चालाई घरमा पढाउनका लागि तयार भयो ।
तर के अगस्त्या र नैना साधारण बच्चाजस्तै आफ्नो उमेरका बच्चाहरुसँगको सम्पर्कको अभावमा बाँचिरहेका छैनन् ?
यो प्रश्नमा अश्विनीले आफ्ना दुबै बच्चा उनीहरुसँग घरमा पढ्न आउने अन्य बच्चाहरुसँग घुलमिल हुने र फिटनेस ट्रेनिङका बेला आफ्ना साथीहरुलाई भेट्ने गरेको बताउँछन् ।
अगस्त्यले १२ कक्षा पास गरेपछि अब अश्विनी आफ्नी छोरीमा फोकस गरिरहेका छन् ।
१७ वर्षकी नैनाले पिएचडीको पढाई सुरु गरिसकेकी छिन् । यति मात्र होइन, नैना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेबल टेनिस खेलमा भारतको प्रतिनिधित्व गर्दछिन् । अब उनका बुवालाई भारतको ओलम्पिक समूहमा प्रवेश लिनका लागि तयार गरिरहेका छन् ।
अश्विनीका अनुसार अब उनी नैनालाई सिभिल सर्भिसेजका साथै ओलम्पिक समूहका लागि पनि तयार गराउन चाहन्छन् ।
डाक्टर बन्न चाहन्छन् अगस्त्यः
अगस्त्यले बीबीसीसँगको कुराकानीमा अब उनी पत्रकारितामा बीए गर्न चाहेको तरे लक्ष्य भने डाक्टरको लिएको बताए ।
तर पत्रकारिताको पढाई गरेर डाक्टर कसरी बन्ने ?
यसको जवाफमा अगस्त्य भन्छन्, ‘म बीए गरुँ वा बी.कम वा मेडिसिनको लागि पढाई गरुँ । म र मेरी दिदी डिग्रीको लागि नभई ज्ञानका लागि पढाई गर्छौं ।’
जलवायु नेतृत्वका लागि जी २०को समय
तेरेसा रिबेरा पेरिस – सन् २०१६ को सुरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु परिवर्तनविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँलाई न..
चीनको शक्ति प्रदर्शन : नयाँ युद्धपोत उद्घाटन
बेइजिङ, वैशाख १३ – चीनले आफ्नो बढ्यो सैन्य शक्तिको प्रदर्शन गर्दै नयाँ युद्धपोत सार्वजनिक गरेको छ । लियायोनिङप..
रेडियो स्टेसन लक्षित आक्रमणमा ५० जना मारिए
दमास्कस, वैशाख १३– टर्कीका सेनाको सुरक्षा कारबाही तथा हवाई आक्रमणमा परी कुर्दिसमा मङ्गलबार कम्तीमा ५० जनाको मृ..
यस्तो छ, ट्रम्पको आदेशको विपक्षमा न्यायाधीशको फैसला
सान फ्रान्सिस्को, वैशाख १३– अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा आप्रवासीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर फि..
आप्रवासीहरूको संरक्षण गर्ने सहरलाई अनुदान नदिने ट्रम्पको योजनामा धक्का
सान फ्रान्सिस्को, १३ वैशाख । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा आप्रवासीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर फ..
टर्कीमा रेडियो स्टेसन लक्षित आक्रमणमा ५० जना मारिए
दमास्कस, १३ वैशाख । टर्कीका सेनाको सुरक्षा कारबाही तथा हवाई आक्रमणमा परी कुर्दिसमा मङ्गलबार कम्तीमा ५० जनाको म..
ट्रम्पको सय दिन : कति वाचा पुरा गरे ?
बिबिसी एक राष्ट्रपतिको सफलता उनको ‘शुरुवाती एक सय दिन’ का आधारमा आँकलन गर्नु, धेरैसम्म कितावी कुरा हुन सक्छ । ..
योगी राज : १५ सरकारी छुट्टी कटौती
एजेन्सी लखनउ, वैशाख १३ – योगी आदित्यनाथको सरकारको मंगलबार बसेको क्याबिनेट बैठकले १५ वटा सरकारी छुट्टी कटौती गर..